Apokalypsy 19: 11-18
Apokalypsy 18 Apokalypsy 19 Apokalypsy 20
Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka, indro, nisy soavaly fotsy; ary Izay nitaingina azy dia atao hoe: Mahatoky sy Marina, ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiany.
Ary miakanjo akanjo voafafy ra Izy; ary ny anarany atao hoe: Ny tenin'Andriamanitra.
Ary ny antokon'ny miaramila any an-danitra dia nanaraka Azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy niakanjo rongony madinika sady fotsy no madio.
Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena; ary Izy hanapaka azy amin'ny tehim-by; ary Izy no manitsaka ny famiazana ny divain'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra Tsitoha.
Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny Izy manao hoe: MPANJAKAN'NY MPANJAKA SY TOMPON'NY TOMPO.
Ary hitako fa, indro, nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voro-manidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe: Avia, ka miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra;
mba hihinananareo ny nofon'ny mpifehy arivo sy ny nofon'ny mahery sy ny nofon'ny soavaly mbamin'izay mitaingina azy ary ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na tsy andevo, na kely na lehibe.